Arsenal oo Janaayo lasoo saxiixaneysa Alvaro Morata. - Caasimada Online
Home Warar Arsenal oo Janaayo lasoo saxiixaneysa Alvaro Morata.
Arsenal oo Janaayo lasoo saxiixaneysa Alvaro Morata.
Arsene Wenger ayaa mar kale u jiheysan doona inuu lasoo wareego xidiga da’yarka ah ee weerarka uga ciyaara kooxda Real Madrid Alvaro Morata. Sida uu qoray wargeyska Daily Mirror.
Tababaraha Arsenal Wenger ayaa ku daalay inuu lasoo saxiixdo da’yarkaan isagoo doonayey inuu si amaah ah uga soo qaato Akadeemiga kooxda Real horaantii sanadkaan, mar kale ayuuna u jeestay sababtoo ah ciyaaryahanku weli boos joogta ah kama heysto Bernabeu.
Morata, oo hadda 20 jir ah, ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horeeyey ee Real dhamaadkii isbuuca markii ay Los Blancos 2-1 ugu awood sheegatay Levante, laakiin Wegner ayaa weli heysta fursad uu kula soo saxiixdo xidigaan bisha Janaayo iyadoo ciyaaryahanku uu labo sano usoo dul qaatay booska keydka ah ee Madrid.